Toban arrimood oo ku saabsan doorashada Kenya - BBC News Somali
Image caption Taageerayaasha Jubilee
Xilli ay soo dhowdahay doorashada Kenya oo dhacaysa 8 August, ayaan halkan idiinku soo gudbin doonaa su'aalo iyo jawaabo la xiriira doorashada.
Qaarkood waxaan u bandhignay khuburo ka faalloota arrimaha doorashada Kenya.
Yaa ku tartamayo doorashada madaxtinimada
Doorashada madaxtinnimada ee 8 bisha August waxaa ku loolami doono madaxweynaha hadda xilka haya, Uhuru Kenyatta iyo 7 musharrixiin oo kale oo uu ku jira hoggaamiyaha isbaheysiga mucaaradka ugu weyn, Raila Odinga.
Msuahrraxa guuleysan doonaa waa inuu helaa 50% codadka la dhiibtay iyo hal cod oo dheeri ah iyo inuu helo ugu yaraan 25% kalabar codadka laga dhiibtay 47 deegaan ee uu dalkau ka kooban yahay.
Ra'yi uruurintii u dambeysay ee la sameeyay waxay muujineysaa in musharrixiinta uusan midkoodna uusan heli doonin 50%.
Haddi ay taasi rumowdo, waxaa loo baahnaan doonaa in la gala wareeg labaad loo gudbo.
Lahaanshaha sawirka Hogaamiyaha xisbiga mucaradka raila Odinga ayaa ku
Image caption Hogaamiyaha xisbiga mucaradka raila Odinga ayaa ku ededeeyay Kenyatta inuu doonayo inuu ku shubto doorasahda
Waxay sidoo kale codbixiyayaasha dooran doonaan:
Xubanaha baarlamaanka deegaanada
Muhiimad intee le'eg ayay qabaa'ilku u leeyihiin doorashada?
Hoggaamiyayaasha siyaasada Kenya ayaa inta badan ku tiirsan qowmiyadda ay kasoo jeedaan, marka ay timaado wakhtiga doorashada,
Sidaas daraadeed la yaab maleh in siyaasiinta qaarkood ay u arkaan in tirada isdiiwaan gelisa ee uu codkooda ku xisaabtamayo uu kaga qiyaas qaato sida ay qabaa'ilku u kala badanyihiin, taasi oo muujinaysa cidda gacanta sare yeelan doonta.
Shanta beelood ee ugu wayn Kenya, ayaa u dhigma 70% guud ahaan tirada guu ee dadka. Sidaas daraadeed qofka u tartamaya xilka madaxtinimo ayaa u baahan in uu isbahaysi la sameeyo mid kamid ah beelaha waawayn si uu helo cod ku filan oo uu ku soo bixi karo.
Qabiilada ayaa sidoo kale kaalin fiican ka qaata soo xulista xildhibaanada labada aqal iyo dawladaha hoose.
Madaxwaynaha Kenya, Uhuru Kenyatta ayaa u sheegay wargayska Financial Times in doorashada sanadkan ay noqon doonto mid lagu loolami doono dhinaca dhaqaalaha, gaar ahaana sare u kaca ku yimid qiimaha cuntada.
Mucaaradka ayaa dawladda ku dhaliilaya in ay ku guul darraysatay in ay wax ka qabato cunto yarida, xilli dalku uu ku jiro wakhti abaar ah.
Image caption Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku taagan xisbiga Jubilee
Waxay sidoo kale mucaaradku dawladda ku eedaynayaan, in ay abuurtay xaalad cunno yari ah, si fursad ay ugu siiso ganacsato xiriir la leh in ay dalka soo geliyaan gallayda, iyaga oo aan waliba laga qaadin wax canshuur ah.
Dawladda ayaa iyadu iska fogaysay eedaymaha uga imanaya mucaaradka, waxayna sheegtay in ay bilawday qiimo dhimis ay ku samaysay daqiiqda.
Musharraxee ayaa ciidammada Kenya kasoo saaraya Soomaaliya?
Madaxwayne Kenyatta ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay sii joogi doonaan Soomaaliya, iyaga oo qayb ka ah hawlgalka nabad ilaalinta, inta nabad iyo xasilooni dib loogu soo celinayo Soomaaliya.
Image caption Askari Kenyan ah oo ka tirsan AMISOM
Kenya ayaa waxaa ka jooga Soomaaliya 3,600 oo askari, kuwaa oo qayb ka ah (Amisom), waxaana Soomaaliya loo diray 2011-kii, si ay ula dagaallamaan xoogaga Alshabaab, oo weeraro dhowr ah ka gaystay gudaha Kenya .
Laakiinse isbahaysiga mucaaradka ee NASA ee uu musharraxa u yahay Raila Odinga ayaa sheegaya in ay ciidamada kala soo bixi doonaan Soomaaliya, haddii ay ku guulaystaan doorashada.
Tan iyo sanadkii 2011-kii, Alshabaab ayaa tiro weeraro ah ka gaysaty gudaha Kenya, sida kii lagu qaaday Westgate mall ee magaalada Nairobi iyo midkii ka dhacay jaamacadda Gaarisa oo ay ku dhinteen 148 qof.
Bishii January ee sanadkii lasoo dhaafay, ku dhowaad 150 askari ayaa la sheegay in lagu dilay weerar Alshabaab ku qaadeen saldhig ciidamada Kenya ku leeyihiin Koonfurta Soomaaliya.
Dawladda ayaan si rasmi ah u sheegin tirada guud ee kaga dhimatay weerarkaas iyo waliba askarta wali ku maqan gacanta Alshabaab
Guddiga doorashadu ma qaban doonaa doorasho lagu kalsoonaan karo?
Xubnaha cusub ee guddigaas ayaa xafiiska la wareegay bishii January ee sanadkan, waxaana xubnihii iyaga ka horreeyey lagu eedeeyey in ay si khaldan u maamuleen doorashadii dhacday 2013-kii.
Dooda ku saabsan in doorasho la isku hallayn karo ay Kenya ka dhacdo ayaa la ogaan doonaa wixii ka dabneeya 8 bisha August.
Image caption Mr Chebukati: guddoomiyaha gudiga doorashooyinka
Guddiga doorashada ayaa sheegay in ay ka shaqaynayaan caqabado kahor yimid doorashadii 2013-kii, sida shaqaale aan u tababarnayn adeegsiga qalabka codbixinta iyo dib u dhac ku yimid helitaanka agabkii loogu tala galay doorashada.
Guddiga ayaa helay qalab cusub, kaasi oo hadda loo adeegsaday diiwaan gelintii cod-bixiyayaasha, waxaana lagu kala saari doonaa codadka marka la gaaro doorashada guud ee dhici doonta bisha sideedaaad.
Wafula Chebukati guddoomiyaha gudiga doorashada ayaa warbaahinta u sheegay in shaqaale loo carbiyay qabashada hawsha oo kaashanaya qalabka cusub, ay muddo bilo ah qaateen tababaro ku saabsan sidii doorashada soo socota u noqon lahayd mid si hufan ku dhacda.
Sidee ol'olaha doorashada loogu adeegsanayaa baraha bulshada?
Baraha bulshada ayaa kaalin muuqata kaga jira doorashadan marka oo eego tii dhacday 2013-kii.
Kenya ayaa leh bulsho si fiican ugu xiran Twitter-ka, waxaana loo yaqaana KOT (Kenyans on Twitter). Saamayntooda ayaa la dareemi karaa wakhtiga ol'olaha doorashada, waxayna horay u riixaan qorshayaal kala duwan.
Axsaabta siyaasadda ayaa dhankooda hawl geliya baraha bulshada, iyaga oo og saamaynta ay leeyihiin, si ay farriimaha ugu gudbiyaan taageerayaashooda.
Image caption Mxaabiista ayaa sandkan ka qeybqaadan doonto codeynta doorasaha guud
Baraha sida wayn loo adeegsado waxaa ka mid ah Facebook iyo Youtube, waxaana siyaasiyiintu kusoo bandhigaan faallooyinkooda iyo qorshayaashooda siyaasadeed.
Madaxwayne Kenyatta ayaa la wadaagay taageerayaashiisa farriimo ka hadlaya midnimada iyo horumarka.
Isbahesiga Odinag ee NASA ayaa saadaaliyay inay heli doonaan 10 milyan cod oo ku filan inuu Odinga ku noqodo amdaxweyne wareega koobaad. ilaa 19 milyan oo qof ayaa daiaawaangalsan.
Lahaanshaha sawirka Twitter/ Raila Odinga
Kooxda ololaha madaxweyne Kenyatta ayaa iyaguna aaminsan in madaxweynuhu uu heli doono 70% codadka la dhiibto.
Kumanaan musharrixiin ah ayaa ku tartamaya kuraas kala duwan, badankoodna ma helin ol'ole doorasho oo ku filan oo ay ku gaaraan dadka ay codka ka rabaan, waxayna taasi ku khasabtay gaar ahaan kuwa sida madaxa banaan u tartamaya in ay xoogga saaraan baraha bulshada sida Facebook Live.
Sidee bay siyaasiyiintu u maal-geliyaan Ol'olohooda doorashada?
Kenya malaha sharciga maal gelineed oo ol'olaha doorashada ah. Isku day arrintaas ku aadan oo ay sameeyeen sanadkii lasoo dhaafay guddiga doorashadu ayaa waxaa hor istaagay baarlamaanka.
Guddiga ayaa soo jeediyay lacagaha loogu tala galay kuraasta kala duwan oo ahayd sidan:
Madaxwaynaha $50 milyan
Barasaabyada $4 milyan
Xildhibaanada labada aqal $290,000
Xildhibaanada maamulada $97,000
Mar haddii aanu jirin sharciga maal gelineed oo ku saabsan ol'olaha doorashada, siyaasiyiinta ayaa u madax banaan in inta ay doonaan ku kharash gareeyaan ol'olohooda doorasho.
Kharashka ugu badan ayaana lagu bixiyaa arrimo farsamo iyo sidoo kale xaysiimo ay leeyihiin musharrixiintu iyo axsaabta siyaasaddu.
Doorashadii lasoo dhaafay mucaaradka ayaa kharash gareeyey lacag dhan $50m, halka xisbiga talada haya uu bixiyay $100m.
Rabshado ma dhici karaan doorashada kadib?
Ken Opalo oo wax ka dhiga jaamacadda Georgetown oo ku taalla Maraykanka ayaa sheegay in ay u badantahay in xoogaa rabshado ah ay jiri doonaan, laakiinse aanay lamid noqon doonin tii dhacday 10 sano ka hor oo ay ku dhinteen 1,000 qof halka 600,000 oo kalena ay ka barakeceen guryohoodii.
"Cabsi badan kama qabo doorashada guud, waxayse u badantahay in ismaamulada qaar ay rabshado ka dhacaan" ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Waa maxay xaaladda dhabta ah ee dhaqaalaha Kenya?
Kenya ayaa leh dhaqaale koraya shantii sano ee lasoo dhaafay, taas oo ka dhigan cel-celis ahaan 5% sanad walba.
Sidaas daraadeed, sare u kaca qiimaha maciishada daruuriga ah sida caanaha, rootiga iyo daqiiqda ayaa kor u kacay 12%, waxaana qoysas badan ay la halgamayaan sidii ay ku heli lahaayeen cunto ku filan.
Dadka Kenya ayaa adeegsanaya hashtaga ah #CostOfLivingKe, waxayna iskula wadaagaan qiimaha maciishada iyo sida ay u maareeyaan noloshooda.
Dhinaca wanaagsan (Waxyaabaha lagu guulaystay)
Kenya ayaa heshay sanadkii 2014-kii maal gelin dhan $1 bilyan oo doolar, kadib markii la sameeyey isbedelo ay kamid yihiin, in hoos loo dhigay kharashka ganacsiga iyo hawl-xafiiseedyada, maal gelinta, kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale lacagaha ku baxa dal ku galka
Dhinaca xun (Waxyaabaha aan lagu guulaysan)
Dhaqaalaha Kenya ayaa waxaa saamayn ku yeeshay musuq-maasuqa, waxaana sii dhiiri geliyay deganaansho la'aanta siyaasadeed iyo xakamaynta qiimaha dul-saar ee bangiga dhexe, si loo dhimo kharashka loo qaato amaahda oo aan si wanaagsan loo maamulin.
Hay'adda horumarinta u qaabilsan qaramada midoobay ee (UNDP), ayaa sheegtay in shaqo la'aanta ka jirta Kenya ay gaartay meeshii ugu saraysay marka loo eego wadamada kale ee gobolka. waxayna hay'addu tilmaamtay in 10 kii qofba 4 ka mid ahi aanay shaqayn.
Heerkee gaarsiisanyahay Musuq-maasuqu?
Warbixin la soo saaray 2016-kii, ayaa lagu sheegay in Kenya ay kaalinta 145 ka gashay 176 wadan oo lagu sameeyey cilmi baaris ku saabsan heerka hufnaaneed ee dalalkaas.
Waxaana Kenya lagu dhaliilay hoos u dhaca kartida iyo wax tar la'aanta hay'adaha ka shaqeeya la dagaalana musuq-maasuqa, waxaana sidoo kale la sheegay inaanu jirin la xisaabtan shakhsiyaadka ku lugta leh wax isdaba marinta.
Image caption Mudaaharaad looga soo jrojeeday Musuqmaasuqa oo ka dhacay Nairobi sanadii 2016
Githongto oo u ol'oleeya la dagaalanka musuq-maasuqa ayaa u aqoonsaday dawladda uu hoggaamiyo madaxwayne Keyatta in ay tahay "tan ugu musuqa badan ee taariikhda Kenya soo martay".
Madaxwaynaha ayaa dhankiisa sheegay in maxkamaduhu ay ku fashilmeen wax ka qabashada musuq-maasuqa.
2015-kii shan wasiir oo ka tirsanaa xukuumadda Jubilee ayaa xilalka laga qaaday, kadib markii lagu eedeeyey in ay wax isdaba mariyeen, halka wasiir kalena uu is casilay.
Xubno ka tirsan mucaaradka ayaa dhankooda la sheegay in ay ku lug yeesheen fadeexada wax isdaba marin ah. Waxaana gudiga la dagaalanka musuq maasuqa lagu eedeeyey inaanay madax banaanayn, arrintaas oo saamayn ku yeelatay wax qabadkooda.